Rose of Sharon: ဟစ်တိုင်
Posted by rose of sharon at 11:26 AM
Moe Sett Pwint February 11, 2011 at 11:43 AM
ကမ်းခြေကိုရောက်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံးဟစ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်ကြီးကို အော်ပြီး တိုင်တည်ကြည့်ပါလား မရို့စ်.. မြေခွေးပေါသော အတုအယောင်ပါတ်ဝန်းကျင်ကနေ လွတ်ကင်းပြီး ငြိမ်းအေးမှုကို ရှာတွေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ဘလော့ဂ်ကို ဟစ်တိုင်လို့ သဘောထားလိုက်ပါလား။ တို့လည်း မနေ့က စိတ်တိုစရာတခုကြုံလို့ ရေးဖို့စဉ်းစားသေးတယ် :)
သက်ဝေ February 11, 2011 at 12:43 PM
အဲဒီလို ဟစ်တိုင်မျိုး ရှာတွေ့ခဲ့ရင် ပြောပါနော်...
တို့လဲ ပြောစရာတွေ ရှိနေတယ်...း))
Anonymous February 11, 2011 at 12:45 PM
Kay February 11, 2011 at 1:05 PM
ဖဘ နဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးလား..း)
ဒါမှ မဟုတ်..စဉ့်အိုးတလုံး ၀ယ်ထားလေ..
နောက်တာနော်.. ပျော်အောင်..း)
mosquito February 11, 2011 at 1:52 PM
ဟစ်တိုင်တခု အသည်းအသန် လိုအပ်လာတိုင်း.. လိပ်ကလေး လိုပဲ ခေါင်းခြေလက် တွေ ဝှက်ပြီး အခွံလေးထဲမှာပဲ အော်ပစ်လိုက်တယ်... ဖောရေ...း((
ငါ့သူငယ်ချင်းလေး ခြင်ဘဝကနေ လိပ်ခလေးလဲ တခါတလေ ဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့...
sonata-cantata February 11, 2011 at 3:18 PM
စီဘောက်ကို ဟစ်တိုင်လုပ်ပြီး အော်ဟစ်နေတာ ဒီက
11 Feb 11, 10:11
S-C: ဘလော့ဂ်မရှိရင် အသက်မရှင်ချင်ဘူး ❤♫ အချစ်ရယ် မနေ့က ငါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်...♪ ♪ ♪
S-C: ♫♫♫ စိတ်ညစ်လို့ အရက် ကို သောက်တယ်...♪♪♪ အရက်သောက်တော့ စိတ်ပိုညစ်တယ် ♫♪...အေ့
11 Feb 11, 10:15
S-C: ♫♪ တနေ့နေ့တော့ ဖြစ်လာလိမ့်မည်...♪ ♫♪ ♪ သို့သော် ဘယ်နေ့မှန်းမသိ... စောင့်ရရက်သာ ကြာခဲ့ပါပြီ ... :( :cry: :zonked:
11 Feb 11, 10:18
S-C: ♫♪ ၀ဲကုတ်ရင်း သီချင်းဆိုမယ် ♫♪ ငှက်ကလေးများလို ကွယ်...♫♪ :cool:
11 Feb 11, 10:19
S-C: အို ♫♪ ..ခရီးသွားရင်း သီချင်းဆိုမယ်...♫♪
ko ko February 11, 2011 at 7:01 PM
Shinlay February 12, 2011 at 1:02 AM
ဘ၀ထဲက သင်ခန်းစာတွေပေါ့ သူငယ်ချင်း...
စိတ်ညစ်ရင် သီချင်းကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ အော်ဆိုကြည့်ပါလား...ယူက သိုးမည်းမဟုတ်ပါဘူး..သိုးမည်းတွေကြားထဲက သိုးဖြူပါ..တို့လဲ ဒီလိုပဲ လိမ်ညာ၊မြောက်ပင့်၊မဟုတ်မှန်းသိရဲ့နဲ့ဟန်ဆောင်ယုံပြနေကြတဲ့လူတွေကြားမှာ အသက်ရှုတွေကျပ်နေခဲ့ဖူးတယ်...ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်..ပျော်ရွှင်ပါစေနော်..
Anonymous March 22, 2011 at 10:43 PM
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာသလို အလိမ်အညာလက်မှတ်တုတွေ ပေါများလာတဲ့အခါ လက်မှတ်စစ်ကိုင်ဆောင်သူကို သံသယမျက်လုံးများနဲ့ ပစ်ခတ်ကြ…အဲဒီအခါ အကြိမ်ကြိမ်တမ်းတမိတဲ့ ဟစ်တိုင်တစ်ခုကို စိတ်ကူးထဲမြင်ယောင်ကြည့်မိ.........
Inn, Sharon. I am also finding this place. Believe most people love the truth but forget to be truth.:).....
jokeraung November 25, 2011 at 8:05 PM
လူတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငွေရဲ့ကျေးကျွန်တွေဖြစ်မှန်မသိဖြစ်နေပြီ၊ လူက ငွေကို ခိုင်းရမယ့်အစား၊ ငွေက လူကို ပြန်ခိုင်းနေတယ်၊ သြော် လူတွေ ဘယ်တော့များမှ လောဘ တွေကုန်းခမ်းသွားမလဲမသိဘူးနော်